Shiinaha X6 Waxsoosaarka Warshad iyo Warshad | Tiknoolajiyada Caafimaadka ee Cadeysan ee Hebei
Qiyaasida Xiriir La'aanta: Ka fogaanshaha taabashada tooska ah ee maqaarka waxay ka dhigeysaa habka cabbiraadda mid aamin ah oo caafimaad qaba, masaafada u dhaxeysa 5-8cm waxay kahortagi kartaa infekshinka gudbay, wejiga heerkulbeegga aan taabashada laheyn ee qaangaarka.
Akhriska Fahrenheit Waa La heli karaa: Waxaad dooran kartaa inaad cabirto adoo adeegsanaya Fahrenheit ama Celsius. Iyo sidoo kale waxay u isticmaali kartaa heerkulbeeggan si loo cabbiro heerkulka jidhka bini'aadamka ama walxaha kala duwan sida caanaha, biyaha ama qolka.
Akhris Deg Deg ah oo Sax ah: Si dhaqso leh u aqri akhris sax ah 1 ilbiriqsi gudahood natiijada cabbirka ayaa runti ka tarjumeysa heerkulka jirka aadanaha. Qalliin la'aan, wuxuu si otomaatig ah u xirmi doonaa kadib 20 ilbiriqsi, taas oo door ka ciyaareysa isticmaalka tamarta yar.
Naqshad Haboon: Soo bandhigid cad iyo badhamada hawlgalka ayaa heerkulbeegga ka dhigaya mid si fudud loo isticmaali karo. Iftiinka iftiinka dambe wuxuu ku habboon yahay isticmaalka habeenkii iyo cabbirka heerkulka. Iyada oo leh qalab raaxo leh oo laga sameeyay cabbir yar, waxaad ku qaadan kartaa meel kasta.
Heerkulbeeg la isku halleyn karo: Saddex midab oo ah soo bandhigista heerkulka casaanka cagaaran ee cagaaran, haddii aad qandho leedahay ama heerkulkiisu sarreeyo, waxaa jiri doona dhawaq dhaqso leh heerkulbeegga infrared. Taabo "Mode" si aad uga bedesho cabirka foodda Aadanaha una aado cabirka Ujeeddada.
Hore: X6 cawl
Xiga: Qoriga heerkulka hore ee X5